Maqaal: 22-jir ayuu fanka kusoo galay sanadkan ayuu 50-sano jirsanayaa si la mid ah bisha May ayuu filimkiisa 100-aad dhameestirayaa – Filimside.net
Maqaal: 22-jir ayuu fanka kusoo galay sanadkan ayuu 50-sano jirsanayaa si la mid ah bisha May ayuu filimkiisa 100-aad dhameestirayaa
Powerful Actor, Talented Actor and Superstar Ajay Devgn sanadkan 2019 wuxuu u yahay mid isaga u qaas ah madaama uu dabaal dagayo sanad guuradiisa 50-aad sidoo kalena filimkiisa 100-aad ayuu duubis ahaan soo idleyn doonaa bisha May.
Haddaba qoraaga caanka ah Himesh Mankad oo ka tirsan Mumbai Mirror ayaa Ajay Devgn xog wareysi gaar ah la yeeshay wuxuuna uga waramay safarkiisa fanka Hindiya si kooban asigoo dhinacyo kala duwan taabtay.
Mashquulka Ajay Devgn: Superstar-kan waxaa u diyaarsan filimada Total Dhamaal (22 Feb 2019) iyo De De Pyaar De (17 May 2019) la daawanayo sidoo kalena wuxuu haatan ku hawlan yahay duubista filimkiisa weyn Tanaji – The Sung Warrior oo bisha May duubistiisa soo idlaan doonto lana daawan doono 22 November 2019.
Tanaji waa filimka 100-aad ee Ajay Devgn sameeyo oo uu door dhameestiran ku leeyahay ayadoo xisaabta lagu dareyn aflaanta uu ku leeyahay muuqaalada martida ah. Sidoo kalena waxaa xusid mudan in Tanaji noqonaayo filimkiisa 25-aad ee uu sameeyo 10-kaan sano (2010 ilaa 2019). Wuxuuna 10-kaan sano sameeyay aflaan sheeko ahaan aan marnaba laga xiiso dhigeyn oo ay ka mid yihiin Once Upon A Time In Mumbaai, Golmaal 3, Golmaal Again, Singham, Singham Returns, Bol Bachchan, Drishyam, Son of Sardar, Raid iyo kuwo kale.
Ajay Oo Xasuustiisa Fanka Dib U Milicsanaayo: Waxaan jiray 22-sano markii aan Phool Aur Kaante (1991) sameeyay balse waxay ila tahay shalay inaan fanka kusoo biiray iima muuqato 28-sano inaan atoore ahay, sidoo kalena macquul ilama ahan inaan 100-filim sameeyay.
Ajay Devgn waxaa aabo u ah halyeegii sameeyay Action-mada ama ficilada halista ah ee filimada lagu soo bandhigi jiray Veeru Devgn wuxuuna fanka Hindiya ku qabsaday filimkiisii kowaad Phool Aur Kaante, kadibna wuxuu aqoonsi weyn ku helay filimadiisii u xigeen sida Jigar, Dilwale, Vijaypath iyo Suhaag.
Ajay Iyo Micnaha Uu Filimka Naajayaz (1995) Uu Leeyahay: Devgn wuxuu caan ku noqday afartiisa sane ugu horeesay fanka Hindiya dhanka Action-ka laakiin filimka Naajayaz ayuu ku muujiyay inuu door walbo matali karo, wuxuuna sheegay inuu yahay filimka uu ku ogaaday atooraha haddii laga rabo fanka inuu ku waaro qasab ku tahay sameynta doorar kala duwan iyo in xirfada sare looga qaado oo door walbo dhib badan la aqbalo sameyntiisa.
Ajay Filimkiisa 26-aad bilada National Awards Ayuu Ku Qaatay: Ma ahan mid uu hilmaami karo Devgn filimkiisa 26-aad Zakhm (1998) inuu ku qaatay abaal marinta jilaa walbo ku riyoodo National Film Awards qaybta atooraha ugu wanaagsan sidoo kalena afar sano kadib biladiisa labaad National Film Awards wuxuu ku qaatay filimka The Legend of Bhagat Singh (2002) wuxuuna sheegay in labadaas filim qalbigiisa aad ugu dhow yihiin wuxuuna sheegay in doorarkaas oo kale dib loo heleyn.
Ajay Iyo Markii Uu Wajiga Gaangester nimo Aqoonsi Ku Helay: Sida uu horey u sheegay Devgn atoore waa midka door walbo ka run sheegi karo sidaa darteed filimkii Campony (2002) door Gaangester nimo ayuu ku matalay wuxuuna ku helay aqoonsi caalami ah kadibna waxaa u xigay filimo badan inuu wajiyadan ku sameeyay oo Classic ah sida Once Upon A Time in Mumbai (2010) oo kale.
Devgn iyo Markii uu Noqday Filim Soo Saare: Bilawgii qarnigan Ajay nasiibkiisa dhanka filim qarash gareynta ayuu ku tijaabiyay wuxuuna maal galiyay filimkii guul dareestay Raju Chacha (2000), laakiin niyad jab kama uusan qaadin ilaa haatan ayuu soo saare yahay wuxuuna maal galiyay aflaan badan oo Big Hits noqdeen sida Bol Bachchan (2012), Son of Sardar (2012) iyo Singham Returns (2014).
Ajay Iyo Markii Uu Director Noqday: Ma ahan wax sahlan in lagu fariisto kursiga agaasinka filimada sidaa darteed Ajay xirfadiisa waxay gaarsiisay inuu Director noqdo ilaa haatan wuxuu sameeyay filimada U Me Aur Hum (2008) iyo Shivaay (2016) inkastoo labadan filim ganacsi ahaan guul dareesteen haddana Ajay siweyn ayaa loogu amaanay aragtidiisa filim sameynta madaama uu si wacan labadan filim isugu daba riday wuxuuna sheegay mustaqbalka dhow markale inuu Director noqon doono.
Ajay Devgn Iyo Sameynta Filimada Shactirada: Kani waa midka kaliya Bollywood-ka ka heestaan ee door walbo ku haboon asigoo leh waji aan dhoola caddeyn aqoonin ayuu haddana shactirada galay wuxuuna ku helay aqoonsi caalami ah madaama uu sameeyay filimo badan oo shactiro hirgaleen balse taxanaha Golmaal laguma gaaro, haatana Total Dhamaal ayuu soo wadaa oo daawashadiisa 12-maalmood naga xigto.
Ajay Iyo Director Rohit Shetty Guushooda Heerka Sare Ah: Haddii uu jiro hal filim sameeye oo uu Ajay 100% aaminsan yahay waa Rohit Shetty wuxuuba ku tilmaamay walaalkiis inuu yahay wuxuu u sameeyay 10-filim oo uu Devgn hogaamiye ka yahay intooda badan guulo lixaad leh ayay gaareen Afarta Golmaal, Labada Singham, Bol Bachchan iyo All The Best, kaliya Zameen iyo Sunday ayaa ka guul dareesteen sidoo kalena mustaqbalka taxanaha Golmaal 5 iyo Singham 3 ayay sameyn doonaan.
Ajay 2 April 50-sano Jirsan doono: Xidigan laga daba dhacay 2 April 2019 ayuu 50-sano jirsan doonaa sidoo kalena waxay u tahay 28-sano uu fanka Hindiya ku jiro waxaana intaas u dheer in filimkiisa Tanaji oo uu bisha May duubistiisa dhameen doono yahay midkiisa 100-aad ee uu sameeyo. Devgn ayaa sheegay in weli uu tamar badan u haayo filim jilista wuxuuna yiri “Ilama ahan inaan 28-sano fanka ku jiro waxaan jeclaan lahaa 50-sano kale inaan fanka kusii jiro wuuna dhoola cadeeyay……”